အီးပေါက်ကြသူများအကြောင်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » အီးပေါက်ကြသူများအကြောင်း
Posted by မောင်ဖိုးတီ on May 31, 2011 in Copy/Paste | 20 comments
၁။ ယဉ်ကျေးသူ ………………..အီးမပေါက်ခင် “ခွင့်ပြုပါနော်” ဟုပြောပြီး အီးပေါက်ပြီးသောအခါ “ဆောရီး” ဟုပြောတတ်သူ။
> > ၂။ မရိုးသားသူ………………….ကိုယ်ကအီးပေါ
က်သော်လည်း ၀န်မခံပဲ “ကျွန်တော့်ခွေးလက်ချက်ပေါ့” ဟုလွှဲချတတ်သူ။
> > ၃။ မိုက်မဲသူ…………………….အီးပေါက်ချင်
သော်လည်း မပေါက်ပဲ အံတင်းကြိတ်မှိတ် အောင့်ထားသူ။
> > ၄။ ဗဟုသုတကြွယ်ဝသူ………ဘယ်အချိန် ဘယ်နေရာတွင် အီးပေါက်ရမလဲ သိသူ။
> > ၅။ ဒုက္ခသည်…………………..အီးအလွန်ပေါက်ချင်သော်လည်း ပေါက်၍ မရနိုင်ပဲ အားမလိုအားမရ ဖြစ်နေသူ။
> > ၆။ အုံ့ပုန်း………………………လက်သည်မပေါ်အောင် (သို့) သူ့လက်ချက်မှန်း ဘယ်သူမှမသိအောင် အီးပေါက်သူ။
> > ၇။ ၀ါကြွားသူ………………….အီးကျယ်ကျယ်ပေါက်ရခြင်း၌ ဂုဏ်ယူတတ်သူ။
> > ၈။ နှိပ်စက်တတ်သူ………….လူများသောနေရာတို့တွင် ရွေးပြီး အီးပေါက်သူ။
> > ၉။ သိပ္ပံဆရာ…………………အီးမှန်မှန်ပေါက်သော်လည်း လေထုညစ်ညည်းမှာကို စိုးရိမ်သူ။
> > ၁၀။ ရှက်တတ်သူ……………အီးပေါက်ပြီး မျက်နှာ တစ်ခုလုံး နီရဲလာသူ။
> > ၁၁။ အကြံပိုင်သူ…………….အီးပေါက်သော်လည်း သူ၏ အီးပေါက်သံကို သူတစ်ပါးမကြားစေရန် အာလူးကျော် (၀ါ) ငါးမုန့်ကျော် ကိုတစ်ကျွတ်ကျွတ်ဝါး၍ အီးပေါက်သူ။
> > ၁၂။ ကျပ်မပြည့်သူ…………အီးပေါက်လိုက်လို့ ငါ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲက လေတွေ လျှော့သွားပြီဟု ထင်မှတ်လျက် Balace ဖြစ်အောင် လေကိုတစ်ဝကြီး တစ်ရှူးရှူး ရှူသွင်းတတ်သူ။
> > ၁၃။ ကပ်စေးနဲသူ………….အီးကို အကုန်တစ်ချိန်ထိုး မပေါက်ပဲ ဖြည်းဖြည်းချင်း တစ်ဆစ်ချင်း ညှင်း၍ပေါက်သူ။
> > ၁၄။ အတ္တကြီးသူ………….ငါ့အီး တယ်မွှေးပါလား ဟုယုံကြည်သူ။
> > ၁၅။ အပေါင်းအသင်းချစ်သူ…သူတစ်ပါးတို့ အီးပေါက်ခြင်းကိုလည်း နှစ်သက်သူ။
> > ၁၆။ အပေါင်းအသင်းမချစ်သူ…….ဆိတ်ကွယ်ရာသို့ သွားပြီးမှ အီးပေါက်သူ။
> > ၁၇။ ဇိမ်သမား………………ရေချိုးကြွေဇလုံတွင် ရေစိမ်ချိုးရင်းအီးပေါက်သူ။
> > ၁၈။ အားကစားသမား……ပင်ပင်ပန်းပန်း အားမစိုက်ရဘဲ အီးပေါက်နိုင်သူ။
> > ၁၉။ ဆဌမအာရုံရှိသူ….အသံကြားရရုံဖြင့် ဘယ်သူအီးပေါက်သလဲဟု ဖေါ်ထုတ်နိုင်သူ။
> > ၂၀။ကံဆိုးသူ……….အီးပေါက်ရန်ကြိုးစားရင်း ချီးထွက်သွားသူ။
ရယ်ရလွန်းလို. mutdfan.com ကနေကူးလာပေးတာဗျို.
ဒုတိယံပိ လား၊ တတိယံပိ လားတော့ မသိ ပို့စ် အဟောင်းဖြစ်ပါကြောင်း…………..။
ကိုရင်အောင်ဘု။ ။ ရွာဒါးများအီးပေါက်သံကျယ်သည်မှာ.. ရွာမှအပျိုချောတသိုက်အား ဆွဲဆောင်စည်းရုံးရန်သာ။ ရွာဦးကျောင်းဆတော်ကြီးမှာ အီးမကြာခဏပေါက်တတ်သော်လည်း.. ထရေမူးနေသော ရွာဒါးတို့အား အပိုဆာဒါးမထည့် ဆုံးမယုံသာ ရည်ရွယ်သည်။… ဆိုသူ။
ကိုရင်ကြောင်ကြီး။ ။ အီးဆိုသည်မှာ.. သက်သတ်လွတ်သမားပေါက်က မွေးသည်ဟုယုံကြည်ပြီး.. သဂျီးအီးပေါက်လျှင်…အဓမ္မ၀ါဒီ ရုပ်ဝါဒသမားဖြစ်သဖြင့် ဘွမ်ဟုသာမြည်မည်ဖြစ်ကြောင်း… ဘွမ်ဟုမြည်ပါက…သဂျီးအား.. ရွာသားအားလုံး ၀ိုင်းဝန်းနှိပ်ကွက်ကြစေလိုကြောင်း …။… ဆိုသူ။
ကိုရင်ပေါက်။ ။ အီးဆိုသည်မှာ..မပေါက်စကောင်း.. ပေါက်စကောင်း..။… ဆိုသူ။
ကိုရင်စိုင်း။ ။ တနေ့တနှိုက်… ကျွန်ုပ်နှင့် စက်ဆရာဦးထင်ကြီးတို့… ထမင်းအတူစားနေခိုက် ဘူ..ဟူသော အသံရှည်တနေရာမှထွက်လာရာ.. ကျွန်ုပ်မှာ.. စားလက်စ ခရင်းနှင့်ဇွန်းကိုချပြီး စူးစမ်းခဲ့သည်..။ ထိုအသံမှာ.. တိုးငြင်းသော်လည်း.. မကြာခင်အတောအတွင်း.. လေထုအတွင်း ၀င်ရောက်လာသည့် အနံ့ ဆိုးကြောင့် .. ဦးထင်ကြီးပေါက်ခြင်းသာ ဖြစ်ရမည်ဟု ပြောလိုက်လေသည်..။ … … ဆိုသူ။
ကိုရင်နိဂိမိ။ ။ ဘယ်မAပေးတွေပေါက်ပေါက်.. အီးဆိုတာ.. Fင်က ထွက်တာပဲ..။ ဒါကို လက်မခံသမျှတော့… ကျုပ်ကအမှန်တရားမို့ ပြောမှာပဲ… … ဆိုသူ။
ကိုရင်အီးရော့စ်။ ။ ဒါကိုတော့ ထောက်ခံပါတယ်..။ အီးဆိုတာ.. အင်္ဂလိပ်လို E အက္ခရာဖြစ်ပေမဲ့.. တကယ်က.. ရောမန်အက္ခရာသာဖြစ်ပါတယ်..။ အင်္ဂလိပ်စာတွေဟာ သူတို့ရိုးရာယဉ်ကျေးမှုမဟုတ်ပါဘူး..။ ဒီလိုပဲ .. သူများဆီက ယူထားတာတွေပါ။
ဒါကိုတော့ လက်မခံပါဘူး.။ မြန်မာဟာ မြန်မာဖြစ်တာမို့ … ယဉ်ကျေးမှုဆိုတာ.. မူပိုင်ဖြစ်တာပါ။ မြန်မာစာကို.. မြန်မာတွေကသာ တီထွင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်..။ သူတပါးယဉ်ကျေးမှု ရိုက်သွင်းမခံပါဘူး။…… ဆိုသူ။
ကိုရင်လင်း။ ။ အီးပေါက်တယ်ဆိုတာ သဘာဝဖြစ်ပေမဲ့.. လူမြင်တဲ့ အများဖတ်တဲ့ နေရာမှာ.. ထင်ရှားအောင်မရေးသင့်ပါဘူး။ အထူးသဖြင့် ကလေးနဲ့ အမျိုးသမီးတွေဖတ်နေတဲ့နေရာမျိုးမှာပါ။…… ဆိုသူ။
ကိုရင်ဖက်။ ။ အီး= E မယုံရင် အင်္ဂလိပ်အဘိဓာန်လှန်ကြည့်… … ဆိုသူ။
ကိုရင်အာ။ ။ အီးကို တချို့ အလန်းလေးတွေပေါက်ရင်တော့.. ကောင်းချင်လည်း ကောင်းမှာပေါ့..။… … ဆိုသူ။
ကိုရင်နို။ ။ အီးက ကကြီးတွေလည်း ပေါက်တာပဲ။ အမေရိကန်တွေလည်းပေါက်တာပဲ။ မြန်မာတွေပေါက်မှ.. အီးကနံတာမဟုတ်ဘူး။… … ဆိုသူ။
ကိုရင်နေ။ ။ အီးကမသာတဲ့အခါ၊ သဲကညာမှာ။ ပျော်ရွှင်စံမရင်းတည်းလို့။ ဥုံခံသတင်းယူခဲ့။… စပ်သူ။
ကိုရင်နေး။ ။ “အတုမဟာရ ဇယံဒါ ပစ္စေကတ ဟောတု ..။ ” နောင်ဘ၀များမှာလည်း ဆက်ပေါက်နိုင်ကြပါစေ။ အီးပေါက်နိုင်တာ အရင်ဘ၀ကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့လို့မှတ်ပါ။ ကျမ်းမာရေးကောင်းစေပါတယ်..။… ဆိုသူ။
ကိုရင်ရွှေမင်းသား။ ။ အီးတခါပေါက် တစ်နှစ်လား၊ တစ်လ လား၊ တစ် ပါတ်လား။… ဆိုသူ။
ကို၇င်ရွှေတိုက်။ ။ ဟဟ။ အီးပေါက်တာလောက်တော့ မကြောက်ပါ။ ပုဝါနဲ့ရေသာ အသင့်ဆောင်ထား။ ပျော်စရာတော့ကောင်းသားဗျ…… ဆိုသူ။
ကိုရင်မောင်ကင်း ။ ။ သူကြီးက ကျနော့လည်း မလမ်းဖလမ်းထအောင် မရေးပေးဘူး။ ကျနော်လည်း ပေါက်တတ်ပါတယ်ဗျ။ ထီ..။ ရေးသူ။
ကိုရင်တညင်။ ။ အီးကို ကျွန်တော်တို့ တညင်သားတွေက .. ( )ခေါ်တယ်ဗျ။ အဲဒီမေးခွန်းကို ဖြေကြည့်ပါ။ … ဆိုသူ။
ကိုရင်ဘ။ ။ ဇောက်ထိုးဆွဲခံထားလျှက်မှ ဘူ ကနဲ့အီးပေါက်လိုက်သောအခါ ရဲမင်းကြီးမျက်နှာမှာ.. ရှုံ့ မဲ့သွားပြီး..။ ဟေ့ကောင်.. လူကြီးရှေ့ ဒီလိုလုပ်ရသလားပြောရင်း ခါးကို ၂ချက်ဆောင့်ကန်လိုက်လေသည်။… ဆိုသူ။
ကိုရင်ဖြိုး။ ။ အီးဆိုသည်မှာ လူ၏သွေးလေခြောက်ခြားသဖြင့် သဘာဝအလျှောက် ခန္ဓာကိုယ်မှ တုံ့ ပြန်မှုများဟုသာ ထင်ပါသည်။… ဆိုသူ။
ကိုရင်အောင်။ ။ ကျွန်တော်တခုပြောချင်တယ်။ အီးပေါက်တဲ့အခါ အသံမထွက်ပဲပေါက်တတ်တဲ့သူတွေက ပိုများထယ်လို့ထင်ပါတယ်။ … ဆိုသူ။
ကိုရင်ကြီးအန်ကယ်။ ။ အီးပေါက်ခြင်းသည် ကိုကိုင်းပြောသလို အီးနှင့်ပေါက်တွဲသုံးထားယုံသာမဟုတ်ပဲ .. အီးပေါက်ခြင်း၏နောက်ကွယ်တွင် အီးရုလိုက်ရသူ တဦးနှစ်ဦးစ တွဲပါလာတတ်သည်ဟု သတိချပ်သင့်ပါသည်။… ဆိုသူ။
သူကြီး။ ။ လက်ကညောင်းသွားပြီ..။ လက်ညောင်းတယ်ဆိုတာ.. လက်ကကြွက်သားတွေဟာ ထပ်ခါတလဲလဲ လုပ်ရလို့ .. သွေးလည်ပါတ်မှုခက်ခဲလာပြီး.. ညောင်းတယ်လို့ ဦးနှောက်က သတင်းပို့လိုက်လို့သာဖြစ်တယ်..။ (အောက်ကလင့်ခ်မှာ အသေးစိတ်ကိုဖတ်ပါ)
ဒီတော့… နောက်နေ့များမှ အားရင် ကျန်တဲ့ကာလသားတွေအမည်ဆက်ဖြည့်ရေးမယ်..။
ဒီတခေါက်တော့ .. ရွာသူတွေတော့ ချမ်းသာပေးလိုက်မယ်..။
ရွာသားများလည်း.. နောက်တာကို နောက်တယ်လို့မှတ်ပါ။ ……………… ရေးသူ။
‘ကိုရင်ဖြိုး။ ။ အီးဆိုသည်မှာ လူ၏သွေးလေခြောက်ခြားသဖြင့် သဘာဝအလျှောက် ခန္ဓာကိုယ်မှ တုံ့ ပြန်မှုများဟုသာ ထင်ပါသည်။… ဆိုသူ။’
အားနွဲ့ချင်ရှာတဲ့ ဖြိုးကို မညှာမတာ ရက်ရက်စက်စက် ကိုရင်လို့ ဘယ်အညှိုးနဲ့ ဆော်ထည့်လိုက်တာလည်း သဂျီးရယ်။ သူ့ခင်မျာ အားကိုးမိတဲ့ သဂျီးကတောင် အသိအမှတ်မပြုမှတော့ ဘယ်သူ့ကို တိုင်တည်ရမှာလည်း။
ကိုနိဂိမိဟာကလည်း တိုနန့်နန့်နဲ့ ကိုင်လို့တောင် မရဘူး (ဂတုံးကြီးမိုလို့ပါ) ကိုပုကြတော့ ထရေမူးနေတာနဲ့တင် ဟိုဒင်းတောင် စိတ်မဝင်စားနိုင်ဘူး။
လောင်းလောင်း အဂိုးက စာကြီး
photwentyရော ဘယ်လို E ပေါက်လဲ။သူကြီးရော ဘယ်လိုပေါက်လည်း။
photwenty က -င်နဲ့ပဲ ပေါက်ပါတယ်
သူကြီးလည်း အတူတူပဲလို့ ကိုယ်စား (ခေါင်းစား) အမြီးကျက်အမြီးစား ပြီး
ဘယ်လို ပဲ ပေါက်ပေါက် ကိုယ့်အီး နံမနံ ကိုယ်အသိဆုံး ပဲ မလား ။ ဒီတော့ နံ တဲ့ အီး ကို လူကြားထဲ မပေါက် ရင်တော့ အကောင်းဆုံး ပဲပေါ့ နော်
အိုင်တို.က E ပေါက်ရင် Fင် နဲ.ပေါက်ပါတယ်
မောင်king တို.များကျတော. အထက်အောက်ပြောင်းပြန်ဇောက်ထိုးဆင်းသွားတာ
” ဂေ. ” တဲ.ဗျား
နာမည်ကြီးတော့လည်း E ကိစ္စအစ မလွယ်ပါ့လားနော်
ဟူးးးးးးးးးးးးးးး မောလိုက်တာ ….. ပါပါရာဇီတွေလက်က လွတ်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့မလဲ
အီး ဋီကာ-e te kar
မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု ၏နာမည်ကို တိုက်ရိုက်သော်လည်းကောင်း
ယ္ခုအခါတွင် ကျွန်ုပ် မိုက်ကယ်ဂျော်နီအောင်ပု မှ
စာမျက်နှာ ရှစ်ဆယ်ကျော်ကျော် ရှိနေပြီဖြစ်ပါသဖြင့်
မော်ဓာန် စူပါ အီးအဘိဓာန် 2012 ကြီးကို ဖြန့်ဝေမှာဖြစ်တဲ့အကြောင်း
အီးပေါက်ခြင်တဲ့အခါ မိမိတို့၏ လက်ခုပ်ဖြင့်အီးကိုပေါက်ထည့်ပြီးပြန်မွှေးကြည့်ဘူးကြပါသလား
သို့မဟုတ် ကိုယ့်လက်ခုပ်ထဲကို ကိုယ့် အီးပေါက်ထည့်ပြီး လူကြားမှာ သွားလက်ဝါးဖြန့်လိုက်ခြင်းဖြင့်
လူတွေစုနေတဲ့အထဲကို ဖင်ကုန်ပြီး ဗစ် ဆိုပြီး အီးပေါက်ထည့်ပြီးထွက်ပြေးဘူးပါသလား
လုံချည်ရေဆိုနေတဲ့အချိန်မှာ အီးပေါက်တဲ့အသံရဲ့ အသံအနေထားမှန်ကို အနီးစပ်ဆုံး အသံတူပြုလုပ်နိုင်ပါသလား ဥပမာ.. ကူ….
နောက်ပြီး လူစုထဲမှာ အီးနံလာပြီးဆိုရင် ရုတ်တရက် ဘယ်သူပေါက်တယ်ဆိုတာကိုသိရအောင်
နောက်တစ်နည်း မိမိကိုယ်တိုင်ကိုသော်၎င်း တစ်ယောက်ယောက်ကိုသော်၎င်း စတင်လက်ညှိုးထိုး၍
အီး . အီး . ဘယ် . သူ . ပေါက် . ပေါက် . တဲ့ . သူ . မှန် . မှန် . ပြော . အီး . ဘွတ် . ဆ . ရာ . ကိုယ် . က . ဟော
ဟော . လို့ . မ . နိုင် . ရုံး . ခန်း . ကို . တိုင် . ဘုံ . ဘိုင် . ဆီ . စွပ် . ဖြွတ် ( ဖြွတ် ဟုဆိုလျှင် အတွင်းအားဖြင့်အော်ပါ )
လို့ တစ်ယောက်ခြင်းစီကို လက်ညှိုးထိုးပြီး ရေတွက်ကြည့်လို့ နောက်ဆုံးဘိတ် ဖြွတ် နေရာမှာကျတဲ့သူဟာ
အီးပေါက်သူဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကို ရှာဖွေဖော်ထုပ်နိုင်တဲ့ ဂမ္ဘီရ အီးသူခိုးဖမ်းနည်းကြီးကိုသိကြပါသလား
….အီးဗေဒ အီးပါရဂူ အီးအထူးပြု အီးအဘိဓမ္မာ ဆရာကြီး
ပါရဂူလည်းပြောသေး၊ ကိုယ်ဟာကိုယ် မရှုကြည့် မနမ်းကြည့်ပဲ ဘယ်လိုလုပ်ပါရဂူဖြစ်သတုံး???
သွားလေသူ ဆွေလှိုင်ဦးဆိုတဲ့စာရေးဆရာ အီးဆရာက ခင်ဗျားတို့ထက်သာတယ်။
အီးနံ့ကိုရှူပြီး သရုပ်ခွဲလိုက်တာနဲ့ ဘယ်နေ့က ဘာစားထားတယ်ဆိုတာအတိအကျပြောနိုင်ပါသတဲ့။
အခုတော့ ဘယ်ဘုံရောက်သွားပြိလဲ မသိဘူးဗျ။
ဟယ်. အရင်ကတော့ မဖတ်မိလိုက်ပါဘူး။ခုမှတွေ့ လို့ ။အမျိုးနှစ်ဆယ်များတောင်ရှိနေတယ်။ရတတ်ပါတယ်။
Photwenty ရေ မီးမီးသော်က
e မပေါက်တော့ဘူး ပြောတယ် ။သေချာလိုလားနော် CCTV တက်လိုက်မယ်ဟွန်း..
e မပေါက်တော့ဘူး ဆိုတာ မဖြစ်နိူင်လို့ ပြောတာပါ။
အီး မပေါက်ဖူးတာကြာပီ .. ရွာထဲမှာ တခါလောက် ပေါက်ကြည့် ဦးမှ .. လန့်သွားအောင်..
ဟဲဟဲ – ကြော်ငြာ ၀င်အုံးမှ ..PREMIER ကော်ဖီ ပါကင်မှတော့ E မပေါက်ဖူး..
P တွေပဲ ခဏခဏ ပေါက်နေတယ်လို့ .. ပြောပေးပါ .. ။
Bus ပေါ်မှာ ကားဆရာ၏အနီးတ၀ှိုက် passenger တယောက်ကအင်မတန်မှနံသော silent E တလုံးပေါက်လိုက်ရာ၊တကားလုံးရှပ်ရှပ်သဲသဲဖြစ်သွားသည်၊ကားကလည်း အဲယားကွန်းအလုံဆိုတော့အဲဒီ E ကကားထည်းတွင်သံသရာလည်နေသည်၊ထိုအခါကားဆရာက “ ဟို အီးပေါက်တဲ့လူကားခရှင်းအုံးလေ” ဟုလှန်းအော်လိုက်တဲ့အခါ၊ထိုအီးပေါက်တဲ့ကောင်ကလန့်ဖျပ်ပြီး “ကျနော်တက်လာကတည်းကပေးပြီးပြီလေ”ဟုယောင်ပြီးထူးလိုက်လေသတည်း။
၀ တမီးနော် အီး၈လိပ်စာ တင်တန်းတက်နေတယ်..အိမ်မှာအီးလိုပဲပြောတယ်…
အီးပေါက်တာတောင် အီးလိုပဲ…P ဆိုပြီးပေါက်တယ်။